Yiba Inkqubo yeFirmware-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ubunjineli beFumax buya kulayisha umthengi weFirmware (ngokuqhelekileyo i-HEX okanye i-BIN FILE) kwi-MCU ukwenzela ukuba iimveliso zisebenze.
I-Fumax inolawulo olungqongqo kwiprogram ye-firmware
Inkqubo ye-IC kukubhala inkqubo kwindawo yokugcina yangaphakathi ye-chip ngesixhobo sokucwangcisa, esahlulwe ngokubanzi sibe yinkqubo engaxhunyiwe kwi-intanethi kunye neprogram ye-intanethi.
1. Ikakhulu iindlela zokucwangcisa
(1) Iinkqubo zendalo yonke
(2) Umdwelisi ozinikeleyo
(3) Inkqubo ye-Intanethi:
2. Iimpawu zeprogram ye-intanethi:
(1) Inkqubo ye-intanethi isebenzisa ibhasi yonxibelelwano oluqhelekileyo lwe-chip, njenge-USB, i-SWD, i-JTAG, i-UART, njl njl. I-interface idla ngokulungiswa kwaye izikhonkwane ezimbalwa zixhunyiwe ngexesha leprogram.
(2) Njengoko isantya sonxibelelwano esibonakalayo asiphezulu, ikhebula jikelele lingasetyenziselwa ukurekhoda ngaphandle kokusetyenziswa kwamandla aphezulu.
(3) Ekubeni ukutshiswa kwe-intanethi kucwangciswe ngoqhagamshelwano lwentambo, ukuba impazamo ifunyenwe ngexesha lovavanyo lwemveliso, i-PCBA ephosakeleyo inokulandelwa kwaye itshiswe kwakhona ngaphandle kokuqhaqha i-chip.Oku akugcini nje ukugcina iindleko zemveliso, kodwa kuphucula ukusebenza kakuhle kweprogram.
3. Yintoni umdwelisi weprogram?
PROGRAMMER, eyaziwa ngokuba ngumbhali okanye isitshisi, isetyenziselwa ukucwangcisa i-IC.
4. Inzuzo ye-IC programmer
Kuninzi lwe-IC yangaphambili, azisetyenziswanga ngokufanayo, kodwa zisetyenziswa kuphela, zifowunela ii-ID DEDICATED.
Ngoko ukuba abaqulunqi bafuna ukuyila ibhodi yesekethe, kufuneka basebenzise iindidi ezahlukeneyo ze-IC ezinemisebenzi esisigxina, kwaye kufuneka balungiselele iindidi ezahlukeneyo ze-IC, ngakumbi kubenzi abakhulu.
Ngoku umyili ufuna kuphela ukulungisa i-IC ukuze ayitshise ibe yi-IC enemisebenzi eyahlukeneyo emva kokuba ii-ID DICATED IDICATED ziyiliwe zaza zasetyenziswa.
Ukulungiswa kukulungele, kodwa isitshisi kufuneka silungiselelwe ukusitshisa.
5. Umthamo wethu:
Izixhobo zeSoftware: Altium (Protel), PADS, Allegro, Eagle
Inkqubo: C, C++, VB
IRigidFlex Pcb Odm PCba IFlex PC IPcb enamacala amabini IPcb Fabrication kunye neNdibano Ibhodi yeSekethe eprintiweyo